Ixesha kunye nabahlobo 15
Ngaba unganditsho nantoni na ngohlobo lomlilo okanye itangatye? Kusoloko kubonakala into eyimfihlakalo. Andikwazi ukufumana ulwazi olwanelisayo kwiincwadi zenzululwazi.
Umlilo ngumoya wedangatye. Idangatye ngumlilo womlilo.
Umlilo sisixhobo esisebenzayo sokuqhuba kuyo yonke imizimba. Ngaphandle komlilo yonke imizimba ibiya kuhlala ingashukumi-ingenakwenzeka. Umlilo kukuba emzimbeni ngamnye onyanzela amasuntswana omzimba ukuba atshintshe. Emntwini, umlilo uziphatha ngeendlela ezahlukeneyo. Into yomlilo ingena ngokuphefumla kunye negazi. Itshisa izicubu zenkunkuma ezihanjiswa ligazi kwaye zisuswe ngakwimigudu yokuphuma, njengepores, imiphunga kunye nomsele wamathumbu. Umlilo ubangela ukuba i-astral, imolekyuli, ifom yomzimba itshintshe. Olu tshintsho luhlala luvelisa ubushushu emzimbeni. Umlilo kunye neoksijini, umzimba opheleleyo apho kubonakaliswa khona umlilo, uvuselele iminqweno, ubangele ukuphuma komnqweno kunye nomsindo, ovutha umzimba we-astral kwaye usebenzise amandla e-nerve. Isenzo esinjalo somlilo sisiseko kwaye ngokwempembelelo yendalo.
Kukho omnye umlilo, owaziwa kwabanye njengomlilo we-alchemical. Umlilo wokwenyani oyinyaniso ngumlilo wengqondo ocinga, oxhathisa imililo kunye nolawulo kwaye unyanzelisa ukuba bahambisane noyilo lobuchule njengoko kumiselwe yingqondo; kanti, xa ungalawulwa ngumntu, imililo yokuqala yomnqweno, inkanuko nomsindo, ilawulwa yingqondo yendalo iphela, oko kukuthi, ingqondo ekwindalo, engabekwanga mntu-ubizwa nguThixo, yindalo, okanye nguThixo obambela kwindalo. Indoda, njengengqondo yomntu ngamnye, esebenza kumlilo wokuqala kwaye ibanyanzela ukuba bahambisane noyilo olukrelekrele, ibangela ukuba bangene kudibaniso olutsha kwaye isiphumo sokudityaniswa kwemililo yecala kuyacingwa. Ngokucinga nangokucinga ukuba imililo yomzimba kunye nezinto ezisisiseko zinikwe ifomu kumhlaba ongabonakaliyo. Ezi ntlobo zeengcinga kwilizwe elingabonakaliyo zinyanzelisa umba omkhulu ukuze uzivumelanise neefom.
Ezinye zeempawu zomlilo kunye nedangatye kukuba zishushu, ukuba azikaze zihlale zinjalo ngokuxhamlayo, zahlukile kwezinye izinto esizaziyo, ukuba zinika ukukhanya, ukuba zivelisa umsi, ukuba zitshintsha iifom ngokuzitshitshisela eluthuthwini, ukuba kwilangatye, umzimba wayo, umlilo uvele ngokukhawuleza njengoko unyamalala, ukuba basoloko benyuka benyuka kwaye babekiwe. Umlilo esiwubonayo nguloo nto umoya womzimba, obanjiwe kubukhoboka ngento enkulu, uyakhululwa kwaye ubuyela kwimeko yawo yangaphambili. Kwindiza yayo, kwilizwe layo, umlilo usimahla kwaye uyasebenza, kodwa ngexesha lokubonakaliswa ngokungasebenziyo isenzo somlilo sincitshisiwe kwaye silawulwa kwaye ekugqibeleni sibanjelwe ngaphakathi kwimizimba yomoya, ngokuba umlilo umoya kuyo yonke imizimba. Umlilo ogcinwe sisibambiso ngento enzulu sinokuwubiza ngokuba ngumlilo wangasemva. Lo mlilo wamva ubukho kuzo zonke izikumkani zendalo. Umlilo oguqukayo, nangona kunjalo, usebenza ngakumbi kwamanye amasebe obukumkani nganye kwamanye amasebe obukumkani obufanayo. Oku kubonakaliswa luhlaza kunye nesalfure kwiminerals, ngeenkuni ezinzima kunye nengca kubukuya lwemifuno kunye namafutha nolusu kwimizimba yezilwanyana. Umlilo ovuthayo ukwakhona kwezinye izinto ezifana neoyile. Umzimba otyibilikayo ufuna ubukho kuphela bomlilo osebenzayo ukuze ukhuphe kwaye ukhulule i-latent yayo kwintolongo. Ngokukhawuleza emva kokukhutshwa, umlilo we-latent ubonakala okomzuzwana, emva koko udlulele kwihlabathi elingabonakaliyo elivela kulo.
Umlilo yenye yezinto ezine ezaziwa ngabo bonke ubugqi. Umlilo yeyona nto inokusebenziseka kakhulu kwizinto zezakhi. Akukho nanye yezinto eyaziwa ngokuba ngumlilo, umoya, amanzi nomhlaba ebonakalayo ngamehlo, ngaphandle kokuba ikwimeko embi kakhulu yento. Ke ngoko sibona kuphela ezona zigaba zisezantsi kakhulu okanye izinto ezithile esiqhele ukuzithetha njengomhlaba, amanzi, umoya nomlilo. Inqaku ngalinye kwezi zinto zine ziyimfuneko ekwakhiweni kwento ebonakalayo, kwaye nganye yezi zinto imelwe ngokunxulumene nenye nenye. Njengoko isuntswana ngalinye lemicimbi yasemzimbeni libambe izinto ezine ngokudibeneyo ngokwenxalenye, into nganye kwezi zibuyiselwa kwimeko yayo yakuba nje indibaniselwano iqhekekile. Umlilo yinto eqhele ukophula udibaniso kwaye ibangele ukuba izinto ezingene kudibaniso zibuyele kumazwe wazo okuqala. Xa umlilo ukhutshiwe, oyinto ephambili kwimizimba enokutsha, kubonakala ngathi uyadlula. Ukudlula kubangela ukuba izinto zomoya, amanzi nomhlaba zibuyele kwimithombo yazo emininzi. Umoya nomoya obuyayo ubonakala kumsi. Elo candelo lomsi elingomoya, neliphawuleka ngokufuthi kumsi womsi, kungekudala lingabonakali. Elo nxalenye lomsi elingamanzi libuyela kumthombo wamanzi ngumswakama, nalo limiswe emoyeni, lize lingabonakali. Elona candelo lisaleleyo lelona candelo lomhlaba lithe tyibilili kuluthuli naseluthuthwini. Ngaphandle komlilo wangokunye kukho umlilo wamakhemikhali oboniswa sisenzo esonakalisayo seekhemikhali ezithile eziziswa kukudibana nezinye iichemicals, ngeoksijini efunxwe ligazi, kunye neferments ezibangela ukugaya ukutya. Ke kukho umlilo we-alchemical oveliswa ngengcinga. Isenzo somlilo we-alchemical yeengcinga zibangela umnqweno omkhulu wokutshintshelwa kumgaqo ophezulu womnqweno, ophinda uhlaziywe kwaye uxhotyiswe kwiminqweno yokomoya, yonke ngumlilo weengcinga. Ke kukho umlilo wokomoya ocutha zonke iintshukumo kunye neengcinga kulwakhiwo kunye nomzimba wokomoya ongafiyo, onokuthi ubonakaliswe ngumzimba wokomoya wokomoya.
Yintoni unobangela wokuba kubekho iingxwabangxwaba ezinkulu, ezifana nemililo kunye nomlilo obonakala ngathi uphuma ngaxeshanye kwiindawo ezahlukeneyo zedolophu, kwaye yeyiphi into eyenzeka kwangoko.
Zininzi izinto ezibangela igalelo, kodwa ezo zinto zininzi zibangelwa kukungqubana, bubukho beziko lomlilo ngaphambi kokuvela kwelangatye. Kuya kuqondwa ukuba umlilo njengesixhobo uyakwazi ukudibanisa nezinye izinto, kwiplanethi yomlilo, okanye nakwezinye iindiza. Ngokudityaniswa kwezinto ezahlukileyo sifumana iziphumo ezichazayo. Xa into yomlilo ikhona ngamandla amakhulu ilawula ezinye izinto ezikhoyo kwaye ibanyanzela ukuba bawushiye ubukho bayo obukhulu. Ubukho besixhobo somlilo siwucima umlilo kwimizimba engabamelwane nakwilangatye elitshintshayo into eboshelwe emlilweni idlula ibuyele kumthombo wayo wokuqala. Idangatye elixhumayo lisetyenziswa ngumlilo lowo ulikhupha liphume lidangatye. Xa into yomlilo ilawula indalo ngokuqina ngokwaneleyo isebenza kuyo yonke into enokutsha; emva koko ngomsindo oshushu, njengokuphambana, loonto ivutha idangatye. Imililo okanye imililo yehlathi inokubangelwa ngumlilo wokuhamba kwabahambi, okanye ngemitha yelanga, kwaye ukungabinamsebenzi kungunobangela wokutsha kwesixeko esikhulu, kodwa ezi ayizizo ezona zinto zibangela konke ngalo lonke ixesha. Umntu usenokuba uqaphela ukuba inzame zokwakha umlilo phantsi kweemeko ezintle zihlala zilandelwa kukusilela ngokupheleleyo, ngelixa, xa kuphoswa intonga yomdlalo okhanyayo edokini, okanye kumgangatho ongenanto wesakhiwo esikhulu apho kubonakala ngathi akukho nto ibonakala ngathi Okwangoku oza kutshisa ngokulula, ukanti umlilo uye wangeniswa ngumthi odangazelayo kwaye usasazeke ngokukhawuleza kangangokuba utshise wonke umhlaba, nangona kunjalo, zinkulu kangakanani iinzame zokuba usisindisile. Iingxabano ezichithe izixeko ezikhulu ngokuyintloko zibangelwa bubukho beziko lomlilo kuzo zonke iimeko ezinjalo, nangona kunjalo ezinye izizathu ezinokuba negalelo.
Ukudibana okuzenzekelayo kuthiwa kukudityaniswa ngokukhawuleza kwento enokuhlaselwa ngeoksijini. Kodwa oyena nobangela ngokuyintloko ulungiselela umbandela ophikisayo onokutsala into yomlilo. Ke, ukuxabana phakathi kwezinto ezimbini ezinokutsha, ezinjengeoyile kunye namarhonya, kulandelwa kukudityaniswa kwequbuliso komcimbi kunye neoksijini esemoyeni; oku kubangela ukuba umlilo uqhume umlilo.
Zithini izinto ezifana negolide, ubhedu kunye nesilivere?
Kukho izinyithi, ngamanye amaxesha ezibizwa ngokuba zizinyithi ezingcwele. Nganye yezi zinto zingamandla axhonyiweyo kunye nokubanjwa, ukukhanya okanye umgangatho ovela kwelinye lemizimba esixhenxe yokukhanya esikubonayo esikhaleni kwaye ubize iiplanethi. Amandla, okanye ukukhanya, okanye umgangatho, ngamnye wale mizimba esiyibiza ngokuba ziiplanethi utsalwa ngumhlaba kunye nenyanga yawo. La mandla aphilayo kwaye abizwa ngokuba yimimoya esemanyeneyo yezinto okanye iiplanethi. Umhlaba nenyanga yawo inika umzimba kunye nefomathi kumandla asisiseko. Iintsimbi zimele amanqanaba asixhenxe amanqanaba ekufuneka udlule kuwo amandla asisiseko kubukumkani beminerali ngaphambi kokuba abe nezinto ezahlukeneyo kwaye adlulele kwizikumkani eziphezulu zendalo. Zininzi izinto ezinokubekwa kuzo. Unyango lunokwenzeka kwaye izifo ziziswa kukusetyenziswa okanye ukusetyenziswa gwenxa kwesinyithi. Iintsimbi zinezinto ezinika ubomi kunye neempawu ezisa ekufeni. Ezi zinto zinokukhutshwa, ngesazela okanye ngokungazi, xa iimeko ezithile zikho. Kuya kuba yinto yokuhamba kancinci ukunikezela iodolo yokuqhubela phambili kwesinyithi kunye nezinto ezihambelana nazo, nangona besinazo iinyani, kuba, ngelixa kukho ukuqhubela phambili okucwangcisiweyo ukusuka kurhulumente ukuya kurhulumente wamandla asisiseko asebenza ngentsimbi, lo mthetho awunakwenziwa ngabo bonke abantu ngokufanayo; into eza kusebenza ukuze kungenelwe omnye iya kuba yintlekele komnye. Umntu ngamnye, nangona eyakhelwe ngokwesicwangciso esifanayo, unokwakheka kweempawu ezithile ezihambelana nemimoya yentsimbi; ezinye zezi ziluncedo, ezinye zi-inimical. Ngokubanzi, nangona kunjalo, igolide imele inqanaba eliphezulu lophuhliso phakathi kwesinyithi. Iintsimbi ezisixhenxe ekubhekiselwa kuzo yi-tin, igolide, i-mercury, ubhedu, isilivere ekhokelayo kunye nesinyithi. Oku kukhanya akufuneki kuthathwe njengomyalelo wokuqhubela phambili, okanye umva.
Iintsimbi ezisetyenziswa kakhulu kwiminyaka edlulileyo aziyona nto ixhaphakileyo ngoku. Igolide ithathwa ngathi yeyona nto ibaluleke kakhulu kwezi zityhutywe zisixhenxe, nangona ingeyiyo eyona iluncedo. Singasasaza ngokulula igolide namhlanje kunokuba sinjalo ngentsimbi. Kwizinyithi, i-iron yeyona nto ifunekayo kwimpucuko yethu, njengoko ingena kuzo zonke izigaba zobomi bemizi-mveliso, njengokwakhiwa kwezakhiwo eziphezulu, ukusebenza kwesakhiwo kunye nokusebenzisa izinto zokuhamba, oololiwe, iinjini, izixhobo, impahla yendlu kunye nefenitshala. . Isetyenziselwa iinjongo zokuhombisa, kwaye ibalulekile kwaye ibalulekile kunyango. Olunye uphuculo luye lwahamba ngokwamaxesha alo ahlukeneyo, abizwa ngokuba yigolide, isilivere yobhedu (okanye ubhedu) kunye nobudala besinyithi. Abantu bomhlaba, bethetha ngokubanzi, bakwiminyaka yesinyithi. Lixesha elinzima kwaye elitshintsha ngokukhawuleza kunalo naliphi na abanye. Esikwenzayo ngoku kuya kusichaphazela ngakumbi nangakumbi nakweyiphi na iminyaka ngoba izinto zihamba ngokukhawuleza kakhulu kwisinyithi sesinyithi kunakwenye. Izizathu zilandelwa ziziphumo zazo ngokukhawuleza kwisinyithi kunakweliphi na ubudala. Oonobangela esimise ngoku baya kudlulela kwelona xesha silandelayo.Iinyaka ekufuneka ilandelayo lixesha legolide. E-Melika, apho kukho khona ugqatso olutsha, sele silungenile.
Ezi ntsimbi zisixhenxe zikhankanyiweyo zibaliwe phakathi kwamashumi asixhenxe izinto ezingaqhelekanga ezimiselweyo zaza zafakwa kwisayensi yanamhlanje. Malunga nokuba zenziwe njani sele sithe amandla, izibane, okanye iimpawu eziphuma kwimizimba esixhenxe esikwindawo, ebizwa ngokuba ziiplanethi, zitsalwa ngumhlaba. Umhlaba umisela umtsalane wamazibuthe kwaye, ngenxa yeemeko ezikhoyo, kukho la mandla athi ngokuthe ngcembe akhiwe ngokuqiniswa, enze isuntswana kwisuntswana eliphakathi kwebhanti enezibuthe etsala amandla. Ityala ngalinye kula asixhenxe laziwa ngombala othile kunye nomgangatho kunye nendlela amasuntswana alala ngayo. Ixesha elithathayo lokwenziwa kwayo nayiphi na insimbi ixhomekeke kwiimeko ezikhoyo, njengoko igolide inokuveliswa ngexesha elifutshane kakhulu xa yonke imiqathango ifunekayo ikho.